တရားဝင်ဇနီးသည် (Arc~3) - ​မေဟန်​နီ - Wattpad
12.7K Reads 4.2K Votes 14 Part Story
By MayHoney127 Ongoing - Updated Jan 05
YaYaLay123 Dec 01, 2018
ဘယ်အပိုင်းက စပီး translateလုပ်လဲဆိုတာ  ပြောပေးပါ plz
user16819913 Dec 09, 2018
Eng nameလေး ပြောပြလို့ရမလား😁
Get notified when တရားဝင်ဇနီးသည် (Arc~3) is updated
#75 in translation See all rankings
ထိုက်ခန် သုံးနှစ်မြောက် ဆောင်းရာသီတွင် မိန်းကလေးတစ်ယောက်သည် ယန်းချန်၊ ​ပေလျှိုတွင်​ ​နေထိုင်​​နေ​သော သူမ၏ ​ယောက္ခမ​လောင်း​တွေဖြစ်​သည့်​ နဉ်​မိသားစုထံ သွား​ရောက်​ခဲ့သည်​။
ထင်မှတ်​မထားစွာဘဲ ​​​သူမနဲ့ စေ့စပ်​​ကြောင်းလမ်းထားခြင်းကို ဖျက်​သိမ်းခြင်းခံလိုက်​ရတဲ့အခါမှာ မိန်းမငယ်​​လေးက သူမရဲ့ ခိုင်​မာလှတဲ့စိတ်​ဓာတ်​နဲ့အတူ ရိုးသားမှုကို သက်​​သေပြဖို့ နဉ်​မိသားစု​ရှေ့မှာပဲ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကိုယ်​ သတ်​​သေရန်​ ကြိုးပမ်းခဲ့သည်​။
မိန်းက​လေး ​သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး ​နောက်​တစ်​ကြိမ်​ သူမ ပြန်လည်နိုးထ​​​​လာသည့်​အခါမှာတော့  လူ​ပေါင်း​မြောက်​မြားစွာ၏ ကံကြမ္မာများမှာ ​ပြောင်းလဲသွား​တော့သည်​။
[ မြန်မာဘာသာပြန် တရုတ်ဝတ္ထု ]
ဘာသာပြန်သူ - ရှန်းဟွမ်း
30.2K 8.2K 320
သူ၏ ဇနီး​ကိုယ်​လုပ်​​တော်​​နေရာကို ရ​အောင်​ကြိုးစားခဲ့သည်​...။
ချီလန်​ဟာ အပြုံးတစ်​စနှင့်​​မေးလာသည်​...။ ​သေရမှာ? ဟင့်​အင်း...​သေချာတာ​ပေါ့...သူမမ​ကြောက်​ဘူး...။
စစ်​သူကြီးနှင့်​​တောသူမ​လေး [Arc 2]
12.2K 3K 121
English Translator:Butterfly's Curse
English Name:Quick Transmigration Cannon Fodder's Record of Counterattacks
Genre:Action,Adventure,Comedy,Gender Bender,Historical,Martial,Arts,School Life,Sci-fi,Shoujo,Supernatural
This story isn't belong to me.I just translate this and full credit goes to original author(s) and english translator(s).
I also don't own any of the pics.
I translate this not for money but for burmese readers.I hope you will support original story too.
Eng tran link==>https://www.novelupdates.com/series/quick-transmigration-cannon-fodders-record-of-counterattacks/
6.3K 1.1K 26
1.2K 299 29
ေ​​ရှာက်​ချင်​၏ ဘဝတွင်​ရခဲ့​သော တစ်​ခုတည်း​သော
​ယောက်ျားတစ်​​ယောက်​ကို မျက်​စိစုံမှိတ်​၍ ရူးရူးမိုက်​မိုက်​
ချစ်​ခဲ့မိခြင်းသာဖြစ်​သည်​။ ​နောက်​ဆုံးတွင်​ သူမသူ့ကို
သို့​သော်​ အပြန်​အလှန်​အားဖြင့်​ သူမ၏ က​လေး​မွေးရက်​နီးကပ်​​နေသည့်​ အချိန်​တွင်​
အ​မြှောင်​မယား ဆို​သော နာမည်​မှ ကင်းလွတ်​ခွင့်​ရခဲ့သည်​။
ကံ​ကောင်းစွာပင်​ ​မိုး​ကောင်းကင်​က သူမကို
​သွေးနီ​ရောင်​ မိုး​ရေစက်​တို့ ​ကောင်းကင်​မှကျဆင်း​နေ​သည့်​
ကမ္ဘာပျက်​ကပ်​ကာလသို့ သူမ​ ရောက်​ရှိသွားကာ
သူမ၏ မ​ကောင်းဆိုးဝါးက​လေး​လေး ကို​မွေးဖွားခဲ့ရသည်​။
2.8K 573 12
​ထောက်လှမ်းရေး၌ အသက်အငယ်ဆုံး မှုခင်းဆရာဝန်
ဌာနမှူးတစ်ယောက်ဖြစ်သော သူမ အနာဂတ်က
ပြောင်းလဲသွားရသည်။ သူမ မျက်နှာ ယခုတော့ ပျက်စီးသွားရပြီ။
Translation of A Mistaken Match:Record of washed grievances
This is justafan translation.
We do not use this translation for our own
profit.All rights belong to original Author.
61.8K 20.1K 1.4K
ရာထူး - ချင်ဝမ်ဖေး (ချင်မင်းသားရဲ့ ကြင်ယာတော်)
နာမည်ပြောင် - အဆိပ်မိန်းကလေး
အကြိုက်ဆုံးအပြုအမူ - လူတွေကို အပ်နဲ့ ထိုးရတာ (အပ်စိုက်ကုသခြင်း*_*)
" ဒီည !.. ဘာဖြစ်ဖြစ် ကိစ္စမရှိဘူး !
သူ့ကို ရအောင် မြှူဆွယ်မယ် ! "
ရာထူး - ချင်မင်းသား
နာမည်ပြောင် - ရေခဲတုံး
အကြိုက်ဆုံးအပြုအမူ - ဝမ်ဖေးရဲ့ ခါးကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပွေ့ဖက်ရတာ
" ဟန်ယွင်ရှီး !.
မင်း ထွက်မသွားသေးဘူးလား ? "
Cover Photo by Jinnie_Grace
A Mob System to Survive(Myanmar translation)
7.6K 1.5K 85
မသိ နားမလည်​ခဲ့ပါသော... [ဘာသာပြန်​]
4K 1.1K 47
သူတို့ ပထမဆုံးအကြိမ်​ဆုံစဉ်​က သူဟာ အနှိမ်​ခံရသော မင်းသားတစ်​ပါး။ လူတိုင်း၏ အနိုင်​ကျင့်​ခြင်းခံရသူ။ သူမကတော့ နန်းတော်​တွင်းက လူအများ၏ အဝတ်​အစားလျှော်​ဖွတ်​ပေးရသော အစေခံငယ်​ကလေး။
ဤအချိန်​ကာလတွင်း သူ တစ်​ယောက်​သာ သူမ၏ ခံစားချက်​များကို လွှမ်းမိုးနိုင်​သည်​။ လှုပ်​ခါနိုင်​သည်​။ သူ့အတွက်​သာဆို သူမ လက်​တွေမှာ မရေမတွက်​နိုင်​သော သူတို့၏ သွေးများ စွန်းချင်​လည်း စွန်းပါစေလေ။ ဤလောကကို သူ အုပ်​စိုးနိုင်​ဖို့ သူမ ကူညီပေးသွားမည်​။
သူမက သူ ချစ်​ရသူ မဟုတ်​ခဲ့သော်​လည်း. . .
သူမက သူ လက်​ထပ်​ယူခဲ့သူ မဟုတ်​ခဲ့ပါသော်​လည်း...
သူမ သူ့အနား ဆက်​နေခွင့်​ရရန်​ ကြိုးစားခဲ့သည်​။ သူ ညီလာခံ ကျင်းပချိန်​ သူ့အနားမှာ ရပ်​နေခွင့်​ရသော တစ်​ဦးတည်းသော အမျိုးသမီးဖြစ်​ရဖို့၊
မ​ကောင်းဆိုးဝါးမင်းသားနှင့်​ သူ၏ အဖိုးတန်​...
8.2K 2.8K 367
ဉာဏ်​နီဉာဏ်​နက်​များပြီး ​ကောက်​ကျစ်​တဲ့သူမဟာ အဆင့်​အတန်းမြင့်​မျိုးရိုးမှ လူမမာသည်​မမ​လေး လာဖြစ်​တယ်​။
​စေ့စပ်​ထားတဲ့ အမျိုးသားဟာလဲ သနားကြင်​နာစိတ်​မရှိဘဲ သူမကို အဆင့်​နိမ့်​ ကိုယ်​လုပ်​​တော်​​နေရာပဲ ​ပေးမယ်​တဲ့။
သူမသတ္တိရှိရှိနဲ့ ​စေ့စပ်​ပွဲ ကို ဖျက်​လိုက်​တာ​ပေါ့!
သူမရဲ့ လက်​ဖျားခါ​လောက်​​အောင်​ ထက်​မြက်​မှုကို အသုံးချပြီး ငရဲကဆက်​ခံသူ Lordနဲ့ လက်​ထပ်​လိုက်​တယ်​။
"ဒါ​ပေမဲ့ my lord! ငါတို့သ​ဘောတူထားတာက အခြားသူ​တွေ​ရှေ့မှာ ဟန်​​ဆောင်​ဖို့ပဲ​လေ ဘာလို့တကယ်​လိုမျိုး ပြုမှု​နေရတာလဲ? Hey hey ငါကို လာမထိနဲ့​လေ"
"မင်းနဲ့လက်​​တွေ အရမ်း​အေး​နေတယ်​ ..  ကိုယ့်​ကို​နွေး​အောင်​လုပ်​ခွင့်​​ပေးပါ​နော်​ ... မင်းရဲ့  ​ခြေ​ထောက်​​တွေ​ရော ​အေး​နေတယ်​ ကိုယ်